Pyae Phyo (MMiTD): December 2011
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) No comments :
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) 1 comment :
Posted by Pyae Phyo (MMiTD)5comments :
အမျိုးအစား: Editing , Portable , Software
အမျိုးအစား: Games , Phone
အမျိုးအစား: IT ဗဟုသုတ
လေးပါ။ မျက်စိအေးစေတာပေါ့ဗျာ။ ရုပ်ထွက်လေးကလည်း အင်မတန်ကောင်းတယ်ဗျ။ဒေါင်းရ အဆင်ပြေအောင် Link သုံးမျိုးနဲ့တင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။
အမျိုးအစား: Screen Saver , Software
အမျိုးအစား: Facebook , IT ဗဟုသုတ
အမျိုးအစား: Phone , Theme
နောက်ထပ် Theme တစ်ခု ကို ထပ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အောက်မှာလည်း နမူနာပုံလေးတွေနဲ့ အစမ်းကြည့်လို့ရအောင်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ Link သုံးခုလုံးကိုဒေါင်းရမှာနော် Link တစ်ခုစီမှာ Theme တစ်မျိုးစီပါဝင်ပါတယ်ဗျာ။ Theme Pack File ကို Double Click နှိပ်ပြီး Apply နှိပ်လိုက်ရုံဘဲ။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်တိုင်းသိသင့်တယ့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာများ
ဘဒ္ဒကမ္ဘာတွင် ပွင့်တော်မူသော ဘုရားငါးဆူ ၁။ ကကုသန်မြတ်စွာဘုရား
၅။ အရိမေတ္တေယျမြတ်စွာဘုရား (နောင်ပွင့်တော်မှုမည်)
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Crazy Talk ဆိုတဲ့ Animation Software လေးတစ်မျိုးတင်ပေး
လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ပုံတွေကို Animation Affect ထည့်ရာမှာတော့ ရုပ်ထွက်ကောင်းတဲ့ Software လေး
တစ်မျိုးပါဘဲဗျာ။ Cbox မှာ rapboy တောင်းသွားလို့တင်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးတည့်မယ့်
သူများလည်းရှိမယ်ထင်လို့ ရှာဖွေပြီး တင်ပေးလိုက်တာပါ။ Bro rapboy ရေ ကျွန်တော် နည်းနည်လေးကြာ
မှတင်ပေးဖြစ်လို့ စောင့်ရတဲ့အတွက် Sorry ပါဗျာ။ crack ပါတစ်ခါတည်းထည့်ပေးထားပါတယ်။
Window Theme တစ်ခုမှမတင်ဘူးလေသးလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ဒါလေးကလည်း
အလန်းဇယားလေးဘဲနော်။ File Size ကတော့ 22.18MB ဘဲရှိပါတယ်။ အသုံးပြုပုံကိုတော့ အားလုံးဘဲသိရှိပြီး သားဖြစ်မယ်လို့ယူဆလို့ မရှင်းပြနေတော့ပါဘူး။ နောက်များမှာလည်း Theme အလန်းလေးတွေကို ဆက်ပြီး တင်ပေးသွားပါ့မယ်။
Cbox မှာ" တောကကိုရင် " လာတောင်းသွားလို့တင်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ပေး
မှာကတော့ Xilisoft.Video.Cutter. လေးဖြစ်ပါတယ်။ Cutterလေးဆိုပြီး အထင်တော့ မသေးလိုက်နဲ့နော်။ အမှန်အကန်ကို cutting လုပ်ပေးပြီး ရုပ်ထွက်ကလည်းမူရင်း Quality ကိုမကျစေပါဘူး။ ကျွန်တော့် ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း Full Version လေးတင်ပေးထားပါတယ်။
ညီကိုမောင်နှမများအားလုံးဒေါင်းလို့အဆင်ပြေမယ့် Link မှာလည်းတင်ပေးထားပါတယ်။
ဒါနအကြောင်းနဲ့ ပါတ်သက်ပြီုး အနည်းငယ် ပြောချင်မိပါတယ်။ ပြောချင်မိတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်း ဒါနဆိုတာ ဘယ်လိုအကျိုးများတယ်.. လှူကြပါ တန်းကြပါလို့ ပြောလိုတာတော့ မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့တွေ ဒါနပြုတဲ့အခါ သတိထားပြီးလုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို ပြောပြချင်မိတဲ့ သဘောလေးပါပဲ။ ဒီတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကရော ဒါနအကြောင်းကို တအားသိနေလို့လားဆိုတော့လည်း မသိသေးပါဘူးနော်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ဟောပြဆုံးမသလိုပါပဲ.. “ဒါနအကြောင်းကို ငါဘုရားသိသလောက်သာ သတ္တ၀ါတွေသိကြရင် စားနေတဲ့ထမင်းလုပ်ကိုတောင် မစားတော့ပဲ လှူဒါန်းနိုင်ကြလိမ့်မယ်” ဆိုတဲ့ အဆုံးမလေးပါ။
အခုတစ်ခါတင်ပေးမှာကတော့ Corel VideoStudio ဆိုတဲ့ Video Editing Software လေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးက မိမိတို့ လိုချင်တဲ့ Video တွေကို စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ရမယ့် Editing Software လေးဖြစ်ပါတယ်။ တခြား Editing Software တွေလိုဘဲ အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူသုံးများနေကြ တဲ့ Ulead ထက် Feature တွေပိုစုံပါတယ်။ Keygen လေးပါ တစ်ခါတည်းထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ File size ကစုစုပေါင်း 614MB ရှိပါတယ်
မိမိတို့ ကွန်ပြူတာထဲက Hardware ထဲမှာ လိုအပ်နေတဲ့ Driver တွေကိုလွယ်ကူစွာ ရှာပေးနိုင်တဲ့ Software လေး ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာမှာ မိမိတို့ ချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ ဆက်စပ် ပစ္စည်း
တွေ အတွက် ဘာ driver တွေလိုအပ်နေလဲဆို တာအလွယ်တကူ သိရှိနိုင်စေ တဲ့ဆော့ဝဲလ်လေး ပါ။ ထုံးစံ အတိုင်းဘဲ Full Version လေးဖြစ်အောင် Serial Key ထည့်ပေးထားပါတယ်။
အမျိုးအစား: Driver , Portable , Software
ဒါလေးကတော့ Video တည်းဖြတ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ရပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က Link မှာ ၀င်ပြီးဒေါင်း ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒေါင်းပုံဒေါင်း နည်းကို
လည်း ပုံလေး တွေနဲ့တကွ သေချာစွာရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ ဒီ Post လေးကို ကိုအာကာဖြိုးရဲ့ Post ကနေပြီး ပြန်လည်းမျှဝေပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကောင်လေးက Trojan မှန်သမျှကိုအကုန်တီးပစ်တယ်ဗျ။အဲဒါတော့ကိုယ်တွေ့ဘဲ။ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေ
အမျိုးအစား: Antivirus , Software
ဆရာတော်အရှင်ကောမလ ဧ။် ကံသုံးပါးနှင့် ပတ်သတ်၍ ဆောင်းပါးလေးကို ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်
မေး။ ။ ဦးဇင်းဘုရား တပည့်တော် အမည်ကသိန်းဇော်ပါ။ ဦးဇင်းဆိုဒ်ကိုဝင်ပြီး
ဖတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်နေရာကနေပြီး မေးခွန်းများ မေးမြန်းရမည်ကို
မသိပါသဖြင့် ဂျီမေးမှ ပေးပို့၍ မေးလိုက်ရပါသည်။ တပည့်တော်အနေဖြင့်
ကံသုံးပါးထဲတွင် မနောကံသည် အပြစ်အကြီးဆုံးဟု မြတ်စွာဘုရားမှ
ဟောကြားထားသည်ကို မရှင်းလင်းပါသဖြင့် ဂရုဏာရှေ့ထား၍
run box မှာ services.msc လို့ရိုက်ပြီး window system ရဲ့ services တွေအကြောင်းကို အခုလို လေ့လာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ System ပိုင်းမှာ သတင်းအချက်လက်တွေကို အကြောင်းကြားပေးတဲ့ service တစ်ခုဖြစ်တယ်။ သူ့ကိုပိတ်ထားမိမယ်ဆိုရင် logon & logoff အခြေအနေတွေမှာ
window system ဆီကို သတင်းအချက်အလက်တွေ အကြောင်းပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီ service က Automatic Start ဖြစ်နေသင့်တယ်။
ကျွန်တော် ဒီနေ့ ဘလော့မိတ်ဆွေများအတွက် ၀င်းဒိုး ဟက်ကင်းနည်းပညာ တစ်ခု တင်ပြပေးပါမယ် ၀င်းဒိုး7မှာ သုံးနည်းပါ အခြားဝင်းဒိုးများမှာတော့ ကျွန်တော်လဲ မစမ်းရသေးပါဘူး ၀င်းဒိုး အက်ဒမင် ကို ဟက်တာ နည်းတွေ မြောက်မြားစွာ ရှိပါတယ် အဲဒီ နည်းတွေ များစွာမှာ CD မပါပဲ လုပ်တဲ့နည်း ရယ်လို့ မရှိသလောက်ပါပဲ အခု ရှားပါးနည်းပညာဖြစ်တဲ့ နယ်မှာနေပြီး repair CD အတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်နေသူများ အတွက် အဓီကထားပြီး repair CD မသုံးပဲ အက်ဒမင် ကို ဟက်နည်းလေး ပြပေးလိုက်ပါတယ်
Posted by Pyae Phyo (MMiTD)2comments :
အမျိုးအစား: Hacking , IT ဗဟုသုတ , Window
Window 8 သုံးချင်သူးများအတွက် နောက်ထပ် Window 8 တစ်မျိုးပါ။ Product key လေး ပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ System Requirement လေးကိုလည်းထည့်ပေးထားပါတယ်။ Try Windows 8 on you PC. You needaPC with 1GHz or faster processor (either 32- or 64-bit), 1GB of RAM (2GB for 64-bit), 16GB of hard disk space (20GB for 64-bit), DirectX9graphics with WDDM 1.0 or higher driver.
English မှ Myanmar သို့ စကားစုအတိုင်းပြောင်းပေးမယ့် Windows Myanmar Translator
ဒါလေးကတော့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကနေ မြန်မာဘာသာကို စကားစုအတိုင်း ဘာသာပြန်
ပေနိုင်တဲ့ Software လေးပါဘဲ။ သူလေးကလည်း အခြား Dictionary တွေထက် ပိုပြီးမကောင်းရင်တောင်
သူတို့ နည်းတူးကောင်းတဲ့ Dictionary လေးဖြစ်ပါတယ်။ အဲ နည်းနည်းလေးတော့ပြောပြစရာရှိတယ်ဗျ။
သူက မြန်မာ 3Unicode နဲ့ Zawgyi Font နှစ်မျိုးလုံးမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဗျာ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) 8 comments :
အမျိုးအစား: Dictionary , Software
ကဲဗျာ.. မြန်မာပြည်မှာ Gmail Account ဖွင့်တာ ခုနောက်ပိုင်း မရတော့ပါဘူး - Phone နံပါတ်ထည့်မှဆိုတော့လည်း မြန်မာပြည်ဖုန်းနံပါတ်က ထည့်မရ... ဒါနဲ့ လျှောက်မွှေတော့ mysteryzillion.org က အတိုချုပ်လေးရေးထားတာကို စမ်းရင်း ပုံနဲ့တကွဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်.. 100% အကောင့်လုပ်လို့ရတယ်နော...
Step 1. https://hidemyass.com/ ကိုရိုက်ထည့်ဖွင့်ပါ။
အမျိုးအစား: Gmail , IT ဗဟုသုတ
Allok Video To DVD Burner v2.6.0531 (Full Version)
ဒါလေးကတော့ Video ကနေပြီး DVD ကို ပြောင်း ပြီး Burn မယ့် DVD Burner လေးပါ။ Cbox မှာ Bro Tharlay တောင်းသွားလို့ တင်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ဒါလေးက လည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ မူရင်း အရည်အသွေးကို မကျစေတဲ့ Burner လေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ထုံးစံ
အတိုင်း ကျွန်တော် Full Version လေးဘဲပေးထားပါတယ်။ How To ဆိုတဲ့ ထဲမှာ Serialပါ ထည့်ပေးထား
အင်တာနက်မရှိသည့်အချိန်တွင် စမ်းသပ်အဆင့်Offline Gmail သုံးစွဲနည်းပေါ့
ဒီ Post လေးကို အရမ်းသဘောကျလို့ ကို အာကာဖြိုး ထံမှ ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်
ပါတယ်။Type your sGmail Service အသုံးပြုသူများအတွက် Offline Gmailကို ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းတွင် Googleမှ စတင်ဖြန့်ဝေလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ Offline Gmail ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဝင်းဒိုးစ်စနစ်
တွင်ပါဝင်သော Microsoft Outlookကဲ့သို့ပင် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှု မရှိသည့်အချိန်တွင်လည်း အီးမေးလ်ဖတ်ခြင်း၊ အီးမေးလ်ရေးသားခြင်းတို့ကို မိမိ၏ကွန်ပျူတာတွင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ဒီတစ်ခါလည်း Window7လေးဘဲထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Home Premium
Version လေးပေါ့ ဒီနေ့တော့ ဘိုးတော်ပြည့်တစ်ယောက် Window 7တွေချည်းဘဲ ဓါတ်ကျနေတယ်ဗျ
အဲဒါတွေချည်ဘဲ တင်ဖြစ်နေတယ်။ဟီးဟီးဟီး။Window7မှာ Full Version မဖြစ်ရင် Windwo7Loder
လေးပါထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်။ အဲဒါကိုတော့ ကျွန်တော်တင် ပြီးသား Post ကိုဘဲ ညွန်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဗျာ။ ဒီမှာ ယူကြပါ။
ဒီကောင်လေးကလည်း Window7Professional Version တစ်မျိုးပါဘဲ။ Window7မှာ Full Version မဖြစ်ရင် Windwo7Loder လေးပါထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်။ အဲဒါကိုတော့ ကျွန်တော်
တင်ပြီးသား Post ကိုဘဲ ညွန်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီမှာ ယူကြပါ။ Version ကတော့ 86 ရော 64ရောနှစ်
Window7SP1 လေးတစ်ခုတွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Window7မှာ
Full Version မဖြစ်ရင် Windwo7Loder လေးပါထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်။ အဲဒါကိုတော့ ကျွန်တော်တင်
ပြီးသား Post ကိုဘဲ ညွန်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီမှာ ယူကြပါ။ Version ကတော့ 86 ရော 64 ရောနှစ်မျိုး
Posted by Pyae Phyo (MMiTD)3comments :
ရှိသမျှ Gmail Account အားလုံးကို Browser တစ်ခုတည်းမှာပဲ တစ်ပြိုင်နက်တည်း Invisible နဲ့ဖွင့်ထားချင်ရင်
ဒီ Post လေးက ကျွန်တော့် ဆရာသမား ဆရာ ထက်ဇော်ရဲ့ MMiTD က Post လေးကို သဘောကျလို့ပြန်ပြီးမျှဝေတာပါ။
ရှိသမျှ အကောင့်တွေနဲ့Gmail အားလုံး တစ်ပြိုင်တည်း စစ်ပြီး Special ဂျီပုန်းလုပ်ကြရအောင်
များသောအားဖြင့် Browser တစ်ခုမှာ mail တစ်ခုပဲ ဖွင့်လို့ ရတယ်လို့ ပဲ သိထားကြပါတယ် ။ အဲ့ဒါကြောင့် gmail အကောင့် နှစ်ခု သုံးခု ရှိတဲ့ သူတွေ အတွက် mail စစ်ရတာ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေနိုင်တော့ပါဘူး ။ တစ်ပြိုင်တည်း စစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မတူညီတဲ့ browser တွေကို အသုံးပြုရပါတယ် ။ (mozilla , IE , Chrome) အစရှိသဖြင့်ပေ့ါ ။ အဲ့ဒါဆို ကွန်နက်ရှင် အခြေအနေနဲ့ ဘာနဲ့ညာနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေ အရမ်းများပါတယ် ။ ပြီးတော့ invisible နဲ့ ဂျီပုန်းလုပ်ပြီး ပတ်ပြေးနေတဲ့ သူတွေ အတွက်လည်း အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး ။
Game လေးတစ်ခုတွေ့လို့ Game ၀ါသနာရှင်တွေအတွက် ချက်ခြင်းဘဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ကျွန်တေ်ာကိုယ်တိုင်တောင် မဆော့ရသေးဘူးဗျ။ ဆော့ဖို့မပြောနဲ့ ဒေါင်းတောင်မဒေါင်းရသေးဘူး။ ကွန်ကလည်း အရမ်းကောင်းနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ နောက်နှစ်တောင်ဒေါင်းဖြစ်ပါ့မလားမသိပါဘူးဗျာ။ ဟဲဟဲ။ အဲဒါကြောင့် မရှင်းပြပေးနိုင်တာကို နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ။
ထုံးစံအတိုင်းဘဲ ဟို ဆိုဒ်ကိုလိုက်မွှေ ဒီဆိုဒ်ကိုလိုက်မွေနဲ့ သားစိုးလိုမျိုးမွှေနေတာ Aston ဆိုတဲ့ Software လေးတစ်ခုသွားတွေ့တယ်ဗျာ။သူကဘာတွေကောင်းသလဲဆိုရင်တော့ Stare Menu လေးတွေ ကိုအလှဆင်လို့ရတယ်ဗျ။ ဘာလှသလဲ လန်းသလဲလို့တော့မမေးနဲ့ဗျို့ လုံးဝရှယ်ဘဲ အာမခံတယ်။အခု ကျွန်တော် သုံးထားတဲ့နမူနာ ပုံလေးကိုဘဲကြည့်လိုက်ဗျာ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD)4comments :
ဒါလေးကတော့ Flashsong လုပ်ချင်တဲ့သူတွေ Animation Banner လုပ်ချင်သူတွေ အတွက်
ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ထုံးစံအတိုင်း ကျွန်တော် Full Version လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Patch File လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်။ Patch File အသုံးပြုပုံကတော့ Patch ကို Double Cilck
နှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်အပေါ်ဆုံးမှာပါတဲ့ SWiSH Max4ကို အမှန်ခြစ်လေးပေးပြီး အောက်က Patch ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Full Version ဖြစ်သွားပါပြီ။ Portable နဲ့တော့ကွာတယ်ဗျ။
Photoshop အသုံးပြုချင်သူတွေ , ဒီဇိုင်နာတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ Portable လေးဆိုတော့ အသုံးပြုရတာအဆင်ပြေပါတယ်။ အသုံးပြုပုံကိုလည်း အသေးစိတ် EBook တင်ထားပေးပါတယ်။ Ebook ကို မြန်မာလိုသေသေချာချာလေး အသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါတယ်။ အခုမှစပြီးလေ့လာသူတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေသွားတာပေါ့ဗျာ။
အမျိုးအစား: Design , Portable , Software
နောက်ထပ် Video Converter လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Converter ဆိုမှတော့ အသုံးပြုပုံတွေအားလုံးအတူတူတွေချည်းပါဘဲ။ Version သာကွာသွားတာပါ အားလုံးက တစ်ပုံစံတည်းပါဘဲ။ ဒီ Converter လေးကလည်းမဆိုးဘူးဗျ။ အခုကျွန်တော်လက်ရှိ စမ်းသုံးနေ
တာ အဆင်ပြေပါတယ်။ Full Version လေးဘဲတင်ပေးထားပါတယ်
မူရင်ဆိုဒါကတော့ ကိုနေမင်းမောင် ဆိုဒ်ပါ။ အခုမှ Link ပြန်ရတဲ့အတွက် အခုမှဘဲ Credit ပေးဖြစ်တာ နားလည်စေချင်ပါတယ်ဗျာ။
လက်တော့ အကြောင်းတွေကို စုံစုံလေး သိစေချင်လို့ လိုင်းပေါ်က ပြန့်ကြဲနေတဲ့ အပိုင်းအစတွေကို စုစည်းပြီး ပို့စ်တစ်ခု အဖြစ် ဖန်တီးတင်ပြလိုက်တာပါ ဒီပို့စ်ကိုဖတ်ပြီးရင်လဲ အားလုံးအဟုတ်တောင် တော်တော်လေး နားလည် သွားမယ်လို့ ယုံကြည့်ပါတယ်
ကျွန်တော် Laptop တလုံးကို စတင်ဝယ်ယူတော့မယ်ဆိုရင် ဘာတွေ သိထားသင့်တယ်
Posted by Pyae Phyo (MMiTD)7comments :
WiFi ကို WiFi လို့ ပဲရေးရေး ။ Wi-fi လို့ ပဲရေးရေး ၊ Wifi လို့ ပဲရေးရေး ရပါတယ်။ အတူတူပါပဲ ။ အရှည်
ကတော့ "Wireless Fidelity" ဖြစ်ပါတယ်။ WiFi ရဲ့မူလပိုင်ရှင်ဟာ Wi-Fi Allance ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းဟာ IEEE802.11 ရဲ့ Specifications တွေပေါ်မှာ Based လုပ်ထားတဲ့ WLAN (Wireless Local Area Network) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Wi-Fi ကိုဘယ်မှာအသုံးပြုကြမလဲဆိုတော့ Mobile Computing ပေါ့ဗျာ ။ Laptops တွေကို Wireless LAN ချိတ်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုဒါကသိပ်မထူးဆန်းဘူးဗျ ။ ဒီထက်ပိုပြီး သုံးလာကြပြီမဟုတ်ပါလား ။
အမျိုးအစား: IT ဗဟုသုတ , Network
ဒါလေးကတော့ မိမိတို့ လိုချင်တဲ့ Icon လေးတွေဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးတဲ့ Softwareတစ် မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းတွေမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် Computer မှာဘဲဖြစ်ဖြစ် မိမိတို့ အသုံးပြုချင်တဲ့ Icon လေးဖြစ်အောင်ဖန်တီး ပေးမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Product Key ပါတစ်ခါတည်းထည့်ပေးထားပါတယ်။ 256x256 ကတော့ Window7နဲ့ Vista အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ 512x512 ကတော့ Leopard (Mac OS 10.5) အတွက်ဖြစ်ပါတယ် ။
► 2017 ( 2800 )
မိုဘိုင်း ဖုန်းများအတွက် မြန်မာဖေါင့်ထည့်နည်းများ ...
(All Laptop & PC Driver) Driver pack solution 11
Window XP &7အမြန်တင်နည်း